US abaphenyi bakholelwa ukuthi okungenani u-10% sabantu United States ahlupheke uvalo nokwesaba inombolo 13. Njalo ngonyaka siba kwezinsuku ezimbalwa lapho kweshumi wombhaki wazalwa ngoLwesihlanu. Wonke umuntu uyazi ukuthi le nkolelo-ze eminye babhebhethekisa inkinga, waliguqula ukwesaba okulula inombolo esibi e yokwesaba yangempela. Ngokwesibonelo, ososayensi balinganisela ukuthi ngoba besaba inombolo abantu 13 e-US kukhona ukulahlekelwa kwezimali, okulingana $ 800 million ngonyaka: abazi ukushada kulezi zinsuku, musa ukuhamba noma musa ngisho ingasebenzi nhlobo. Manje kuyini lokho magic abe lezi zibalo nokukholelwa ezeni kungani kangaka phakathi uquqaba? Zama ukuqonda.
Insumansumane bokuqala emhlabeni sibalo 13
Bewazi yini ukuthi umzila okuyimfihlakalo kweshumi wombhaki sika osuka esikhathini kumiswa idokhumenti yezomthetho endala kakhulu emhlabeni, Hammurali Ikhodi. Ngakho, ngokusho kwezazi-mlando, kusukela phakathi uhlu kwezinkambiso zomthetho ngasizathu simbe ke ivinjelwe umthetho 13. Nokho, akusiwona obuyimfihlo futhi akukhona nje ukuqondana kwezinto njengoba abanye abafundi bazothini. Kumane nje iphutha lokubhala esenziwe omunye abahumushi lokuqala idokhumenti, futhi eqinisweni, kule nguqulo yokuqala Ikhodi Hammurali iphuzu kule nombolo 13 lapho.
Phakathi naleso sikhathi, zezibalo ososayensi zezwe lasendulo wabonisa ukuphakama inombolo 12, okuyinto kubhekwa enhle. Ngokwesibonelo, izakhamuzi Sumer lasendulo athuthukile uhlelo yabo ukubala, ogxile inombolo 12. Echoes zalesi simiso vuma kuze kube yilolu suku. Sine ezingu-12 ngonyaka kanye ngosuku, ihlukaniswe nowe ezimbili, ngayinye okuyinto sihlanganisa amahora 12. Yiqiniso, izinombolo uyeza ngokushesha ngemuva "ophelele" kungabukeka into engaziwa emehlweni abantu, elisabisayo okungalungile.
Amabili zinkolelo-mbono ezicatshangelwayo ethandwa kakhulu lihlotshaniswa lingavumelani esibi yenomboro 13 ukuze izenzakalo lasendulo: ukuvela izivakashi 13, uphatheke kabi ibhalansi wonkulunkulu 13 (unkulunkulu Locke), no-13 umphostoli noJudasi Iskariyodi owathengisa uJesu efika eSidlweni Sakusihlwa Sokugcina. Ekhohlisayo unkulunkulu Loki ngesikhathi ibhola isidlo eValhalla esiphazamisayo belinganisela futhi kuletha okubi nemibhikisho emhlabeni wonke, futhi kamuva noJuda owakhaphela uJesu Kristu.
ukwesaba simbe kwezwe design Western
Emhlabeni wonke, kubhekwa ukuba ezivamile umkhuba ukwesaba magic izinombolo. Ngakho, e-Arabhiya futhi eNingizimu-mpumalanga Asia, futhi kuze kube namuhla izizwe ukungatholi ukuhlangabezana ngenomboro u-4, okuyinto bhekwa kusukela esikhathini Ancient Egypt. Ngaphezu kwalokho uhlamvu Chinese okusho "4" uvumelane futhi hieroglyph esho "ukufa."
Nokho, inani 13 kuyinto ngokuvamile a Pariah eNtshonalanga. Ngokwezibalo, ezingaphezu kuka-80% izakhiwo e-US abanalo 13 phansi, amahhotela, izibhedlela kanye zezindiza baphinde bashaqa le nombolo ka-shintshana.
Kuyini ukubhula unezinduku na?
Ukuqagela Runes - eziningi isiphetho
Kungani ukulimala emuva? Udokotela uzosiza ukuthola impendulo yalo mbuzo
Gingerbread: iresiphi. Inhlama iresiphi Gingerbread House
Izinkukhu into encane: zohlobo, incazelo kanye isithombe sabo
Ella Fitzgerald: Biography, isithombe